Utywina njani isitrayikhi? | Ezezimali
UJoseph kwakhona | | Uqoqosho ngokubanzi, Ngqesho
Ukungaqeshwa yenye yeengxaki ezixineneyo kubemi baseSpain. Ngama-indices aphambili kuwo onke amazwe aseYurophu. Ngenxa yale meko, abo bachaphazeleka yile meko yentlalo banayo kuphela ukuseka imeko yengqesho ngokusemthethweni kwiZiko lezeNgqesho leSizwe (i-INEM) ukuze ufumane izindululo zomsebenzi omtsha kwaye ngokuqinisekileyo uxhamle iyanceda nezibonelelo ezenzelwe ukungaphangeli. Njengomzekelo inokuba yimeko yakho ekhethekileyo kunye namawakawaka amaSpanish ahamba kolu luvo lunzima kwezentlalo.
Ngeli xesha, inani labantu ababhalisiweyo abangasebenziyo kwiiofisi zeenkonzo zokuqeshwa koluntu lehle ngoFebruwari ngo Abayi-6.280 abaphangeli xa kuthelekiswa nenyanga ephelileyo (-0,18%), eqhutywa ikakhulu licandelo leenkonzo, njengoko kuchaziwe ngoLwesihlanu ngu-Mphathiswa Wezengqesho noKhuseleko lweNtlalo. Ngale ndlela, inani elipheleleyo labangasebenziyo lifikelele ekupheleni kukaFebruwari inani lama-3.470.248 abangasebenziyo, elona nqanaba lisezantsi kule minyaka isithoba idlulileyo, njengoko kubonisiwe kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezengqesho. Ngaphakathi kuthotho lwembali oluqhathanisekayo, oluqala kwi-1996, ukuvela kwentswela-ngqesho kwiinyanga zikaFebruwari akukhange kulandele imeko efanayo. Kwi-13 ye-23 kaFebruwari kuthotho bekukho ukuncipha kokungabikho kwemisebenzi, xa kuthelekiswa neenyanga ezilishumi zokunyuka.
Ukwehla ngoFebruwari kulo nyaka kungaphantsi kunoko kubhaliswe ngo-2017 (-9.355 awusebenzi), kodwa umahluko ngokunyuka kwabantu abangama-2.231 inamava ngoFebruwari 2016. Ngo-2015 intswela-ngqesho yehle ngoFebruwari ngabantu abayi-13.538 kwathi ngo-2014 yenza njalo nge-1.949 yabangasebenziyo. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, umndilili wokunyuka kwemisebenzi ngoFebruwari ngabantu abangama-50.696. Kwimeko ehlengahlengisiweyo ngokwamaxesha onyaka, ukungabikho kwemisebenzi kwehle ngoFebruwari ngabantu abangama-23.139 kwinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo kwehle ngama-280.628 abangasebenziyo (-7,5%).
1 Ukungabikho kwemisebenzi: bhalisela iiofisi
2 Ukulungiswa okuvela kwiiofisi
3 Ukuhlaziywa kwe-Intanethi
4 Yenziwa njani ngokusesikweni kwi-Intanethi?
5 Ulawulo ngomnxeba
6 Ukutywina ukunqunyanyiswa kwiselfowuni
Ukungabikho kwemisebenzi: bhalisela iiofisi
Enye yezinto zokuqala ekufuneka uzenzile ukuba awuphangeli kukubhalisela ukungabikho kwemisebenzi kwiiofisi zel IZiko lezeNgqesho leSizwe. Kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni le nkqubo iqulathe eyona njongo iphambili yokuba ukwenziwa kwayo ngokusemthethweni kungabizi mali eninzi kwaye ungayihambisa imfuno yomsebenzi ngokukhawuleza. Ukuze ngale ndlela ungachithi ixesha kwiinkqubo ezingenamsebenzi okanye ude ubhideke kwiinkqubo zolawulo ekuya kufuneka uzenze ukusukela ngalo mzuzu.
Enye yeemeko eziba ngakumbi ezifanelekileyo kule nkqubo yile ibhekisa kwindlela yokutywina ugwayimbo. Ewe ayizukuba yinkqubo enzima kakhulu, kude nayo. Kodwa ngokuchaseneyo, kuya kufuneka uhambe inyathelo ngenyathelo ukuze ukwazi ukuyiphuhlisa ngokuchanekileyo nangokuhambelana nemigaqo yangoku. Ngele ndlela, uya kukuphepha ukulinda ngokungeyomfuneko Oko kunokukwenza ukuba uchithe ixesha elininzi kunokuba kufanelekile. Kuya kufuneka ulandele amajelo olawulo esiya kukuveza ngezantsi.
Ukulungiswa okuvela kwiiofisi
Elinye lawona macandelo afanelekileyo enkqubo kukungaphepheki kokuhlaziywa kwekhadi lokungaphangeli onyanzelwe ukuba ungaphangeli. Kuba ukuba awulithathi eli nyathelo uyakunyanzelwa ukuba ube phantsi kwezohlwayo ezibalulekileyo kwaye oko kungakhokelela ekubeni ulahlekelwe lulo lonke uncedo onokuluthatha ngelixesha. Ewe, ngumhla wokuba lixesha lokwenza le nkqubo yezolawulo, kuya kufuneka ubonakale eofisini kunye nekhadi lakho lokungaphangeli kunye nesazisi sakho. Ayikho enye injongo ngaphandle itywinele wena kwaye ikunike le mihla yokuhlaziya ilandelayo.
Kuyakubaluleka ukuba ulisungule eli nyathelo libalulekileyo ukuze ungaphulukani nenqanaba lakho njengomntu ofuna umsebenzi kwaye wonwabele iinkonzo kwaye izibonelelo ezenziwe kubasebenzi abangaphangeliyo. Ngayiphi na imeko, awuyi kufuna ukuqeshwa kwangaphambili kwiZiko lezeNgqesho leSizwe. Kuya kufuneka ubonakale kuphela ngexesha elichaziweyo kunye namaxwebhu abhengezwe ngaphambili. Ukuze ngale ndlela, ubekwimeko yokuyihlaziya le mfuno ikhethekileyo. Uya kuyenza le nkqubo amaxesha ngamaxesha njengoko ihambelana nawe ngelixa ungaphangeli kwilizwe lomsebenzi.
Ngayiphi na imeko, ukubonakala kwetekhnoloji entsha kukuvumela ukuba uyenze kakuhle le nkqubo kwikhaya lakho okanye kwenye indawo. Ngothotho lwezibonelelo esiza kukucacisela apha ngezantsi ukuba unqwenela ukusebenzisa la majelo amatsha okuzalisekisa. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezizezona zibalulekileyo? Ewe, nika ingqalelo encinci kuba iya kuba luncedo kakhulu xa ukule meko yobuqu.
Akuyi kufuneka Zilinganisele kwiiyure zomsebenzi. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, ungayenza nangaliphi na ixesha losuku nangeempelaveki ukuba ngumnqweno wakho.
Unokwenza le nxalenye yenkqubo nakweyiphi na indawo yejografi yaseSpain. Ewe akunamsebenzi ukuba ubekwa phi kuba yonke into oyifunayo kukunxibelelana kwi-intanethi.
Xa ugqibile ukuvuselela isicelo sakho somsebenzi, unga ube nevoti yokungaphangeli kwikhompyuter yakho. Sukuba nexhala malunga nokuba semthethweni kwalo kuba konke okusemthethweni kuqinisekisa yohlaziyo.
Yenziwa njani ngokusesikweni kwi-Intanethi?
Ukutywina isicelo somsebenzi yinto elula kakhulu kuba kuya kufuneka ungene kwisango leNkonzo yeNgqesho yoluntu oluzimeleyo apho ukhoyo okanye uhlala khona. Ezantsi khangela uluntu kuluhlu. Iwindow entsha yenkonzo yengqesho yengingqi iya kuvulwa kwaye kulapho kuya kufuneka uyenze yonke le nkqubo ngendlela elula kwaye ngaphandle kwengxaki ezigqithisileyo.
Kwelinye icala, akubalulekanga ukuba unikeze isatifikethi sedigital okanye i-ID ye-elektroniki. Ewe akunjalo, nangona ungayisebenzisa ukwenza lo msebenzi, uya kufuna kuphela ukuba negama lakho Igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha elihambelanayo ukufikelela kwimixholo apho unokugqibezela khona inkqubo yolawulo yokuhlaziya ikhadi lakho lokungaphangeli.
Olu khetho lufumaneka kuphela kwiindawo ezimbini ezizimeleyo: Iziqithi zaseBalearic naseCanary. Apho kuya kwanela ukubiza ngeli jelo lonxibelelwano. Ukusukela ngalo mzuzu uye phambili, bonelela ngedatha yokuchonga ukuze ibango lihlaziywe ngokuzenzekelayo. Ngayiphi na imeko, kwaye ukuze ungabinangxaki kulawulo lwayo, kufanelekile ukwenza le nkqubo yezolawulo kuluntu oluzimeleyo ngokwalo hayi kwelinye. Njengoko kufanelekile ukunqanda iifowuni ezinamanani afihliweyo.
Enye into ekufuneka uyivavanyile yile yenzekayo xa uphoswa ngumhla wokuhlaziywa. Ewe, ukuba ibiziintsuku nje ezimbalwa kunokwenzeka ukuba ungasilungisa esi sehlo kwaye ungabinangxaki yokuhlangabezana nale mfuno. Kodwa ungagqithi kwimida ngenxa yokuba ungaphulukana nezibonelelo ozifumanayo xa ungaphangeli: ubukhulu, uncedo, njl. Ngale ndlela, kuyacetyiswa ukuba ube nomhla wokubonisana ubhalwe phantsi ukuze ucwangcise olu tyelelo ngesiqhelo. Apho kuphela ngenxa yokunyanzelwa kwe-majeure (ukugula, ingozi, njl.njl.) Ungawubekisa ixesha elide ukuba usazise kwangethuba.
Ukutywina ukunqunyanyiswa kwiselfowuni
Ukuthatha ithuba lokuvela kwetekhnoloji entsha, unokujongana nolu lawulo kwiselfowuni yakho, nangona kuthotho lweenkcukacha. Eyokuqala kukuba kufuneka ukhuphele usetyenziso kuluntu ngalunye oluzimeleyo. Ungayifumana phi? Ewe, ilula kakhulu, kwiwebhusayithi yeearhente ezijongene nolawulo lwenkqubo. Kodwa nakumaqonga aphambili ahambayo, nokuba Google Play, Ivenkile yosetyenziso o mfono Windows. Iya kuba yindlela ebhetyebhetye yokwenza lo msebenzi, nokuba uphi kwaye oko kuya kukubonelela ngokuthuthuzeleka ngakumbi kulwakhiwo lwayo.
Kwelinye icala, kuya kufuneka ukhumbule ukuba nayiphi na inkqubo oza kuyisebenzisa ukutywina ukunqunyanyiswa, unethuba lokuphelisa inkqubo ngokutywina okungqinelanayo. Oko kukuthi, baya kukubonelela nge- uxwebhu lokungaphangeli okanye ukuvota (DARDE) onayo yonke into esemthethweni njengobungqina bohlaziyo. Iya kusebenza njengoxwebhu kwixesha elizayo xa uza kwenza lo msebenzi wolawulo. Apho kuyakufuneka uyiprinte kuphela ukuze ube kunye namanye amaxwebhu.
Into entsha ngokubhekisele kwinto eyenzekileyo kwiminyaka embalwa edlulileyo kukuba ngeli xesha ungathatha ithuba lobuchwephesha obutsha kwaye utyumbe ukungabikho kwemisebenzi ngaphandle kokuziveza kubundlobongela obudalwe kukuya kwiofisi yengqesho. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ube nokukwazi ukukhetha ijelo elifanela iprofayili yakho yomenzi wesicelo: amawaka, i-intanethi okanye ngomnxeba wemveli. Kuba umbuzo obuzwayo kukuba awugqithisi kumhla obizelwe ngawo ukuba wenze ngokusemthethweni olu xwebhu lujolise kubantu abangasebenziyo. Ayothusi into yokuba nakuphi na ukusilela okanye impazamo kwinkqubo inokukuxabisa kakhulu ukusukela ngoku. Ungalibali ukuba yonke into iphantsi kolawulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Utywina njani isitrayikhi?